IOS 8.1 जेलब्रेकमा स्थापना गर्नुहोस् जब तपाईं सक्नुहुन्छ आईफोन समाचार
आईओएस .8.1.१ स्थापना गर्नुहोस् जेलब्रेकमा जब तपाईं सक्नुहुन्छ
एप्पलले भर्खर आईओएस .8.1.1.१.१ जारी गरेको छ, प्रदर्शन सुधार र बग फिक्सको एक संस्करण, तर त्यसले जेल ब्रेकलाई बिदाइ दिन्छ। पंगु आईओएस .8.1.1.१.१ को साथ उपयुक्त छैन, जुन एप्पलले जेलब्रेकका लागि ढोका बन्द गर्दछ। तर अझै पनी संस्करण आईओएस to.१ मा अपडेट गर्न विकल्प छ, जुन पा which्गुसँग उपयुक्त छ र जो जेलभ्रोन हुन सक्छ। तपाइँ कसरी आईओएस .8.1.१ डाउनलोड गर्न र तपाइँको उपकरणमा स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ? हामी तपाईंलाई तल सबै विवरण दिन्छौं।
एप्पलले अझै आईओएस .8.1.१ मा साइन इन गर्दछ
यो लेख प्रकाशित गरेको समयमा एप्पलले अझै आईओएस .8.1.१ मा साइन इन गर्दछ, त्यसैले हामी अझै यसलाई आधिकारिक रूपमा हाम्रो उपकरणहरूमा स्थापना गर्न सक्दछौं। हामीलाई थाहा छैन कि यो अवस्था कति लामो हुन्छ, त्यसैले यदि तपाईं यो नयाँ संस्करण स्थापना गर्न चाहानुहुन्छ भने, हाम्रो सुझाव यो छ कि तपाईं यो सक्दो चाँडो गर्नुहोस्। समस्या यो हो कि यदि तपाईले अहिले आफ्नो उपकरणलाई आईट्यून्समा जडान गर्नुभयो र अद्यावधिकमा क्लिक गर्नुभयो भने, यो सिधा संस्करण .8.1.1.१.१ स्थापना गर्दछ। त्यसोभए तपाईं कसरी आईओएस .8.1.१ स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ? यो जस्तो देखिन्छ सजिलो छ। तपाईले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको यो आधिकारिक एप्पल लि from्कबाट पुरानो संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस्।
आईप्याड एयर २ वाइफाइ
आईप्याड एयर २ वाइफाइ + सेलुलर
आईप्याड मिनी ((मोडेल A3)
आईप्याड एयर (मोडोल A1475)
आईप्याड एयर (मोडेल A1476)
आईप्याड मिनी ((मोडेल A2)
आईप्याड ((मोडेल A4)
फाईल छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईंको उपकरणसँग मिल्छ र निश्चित गर्नुहोस् कि यो डाउनलोड "ipsw" सँग डाउनलोड गरिएको छ। यदि "zip" को रूपमा डाउनलोड गरिएको खण्डमा तपाईंले "ipsw" फाइल प्राप्त गर्न यसलाई अनजिप गर्नुपर्नेछ। तपाईको यो कम्प्युटरमा एक पटक तपाईले पाउनुहुनेछ, तपाईंको उपकरण जडान गर्नुहोस् र आईट्यून्स चलाउनुहोस्.
आईट्यून्समा तपाईको आईफोन वा आईप्याडको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्, र ट्याब «सारांश» मा तपाई बटनहरू «अपडेट / अपडेटको लागि खोजी» «आईफोन पुन: भण्डार see देख्नुहुनेछ। यदि तपाईंले अपडेट गर्नुभयो भने तपाईं सबै जानकारी राख्नुहुनेछ, यदि तपाईं पुनर्स्थापित हुनुभयो भने तपाईंसँग सफा उपकरण हुनेछ जसमा तपाईं पछि ब्याकअप पुनःप्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने। कि त विकल्प यस विधिका लागि मान्य छ। तपाईंले "शिफ्ट + अपडेट / रिस्टोर" (विन्डोज) वा "Alt + अपडेट / पुनर्स्थापना" (म्याक) थिच्नु पर्छ। र तब विन्डो खुल्नेछ तपाइँसँग "ipsw" फाईल आईओएस .8.1.१ को साथ पत्ता लगाउन सोध्नुहोस् जुन तपाईंले पछि डाउनलोड गर्नुभयो। यसलाई चयन गर्नुहोस् र तपाइँ देख्नुहुनेछ कि तपाइँको उपकरण यस संस्करणमा कसरी अपडेट हुनेछ। त्यसो भए तपाई पang्गु मार्फत जेलब्रेक गर्न सक्नुहुन्छ।
यस विधिले कार्य गर्दछ मात्र एप्पलले आईओएस .8.1.१ मा हस्ताक्षर नगरे सम्म, जुन हामी तपाईंलाई यसबाट सुन्ने बित्तिकै सूचित गर्नेछौं।.
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS 8 » आईओएस .8.1.१ स्थापना गर्नुहोस् जेलब्रेकमा जब तपाईं सक्नुहुन्छ
लुइगी डे ला क्रुज भन्यो
धन्यबाद, तपाईंले मलाई एकबाट बाहिर निकाल्नुभयो, म यो कार्य गर्न जाँदैछु, स्याउले यस पछि धेरै व्यक्तिलाई हराउनेछ।
लुइगी डे ला क्रुजलाई जवाफ दिनुहोस्
एप्पलले यसको अनलाइन स्टोरमा इकोबी ther थर्मोस्ट्याट थप गर्दछ
आईओएस .8.1.1.१.१ अब डाउनलोडका लागि उपलब्ध छन्, यी यसको समाचारहरू हुन्